The mmebe na-arụ ọrụ na DK New Media logo hụrụ na ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche na nke okike iji nwekwuo nsonaazụ maka ndị ahịa anyị. Ihe nnọchianya ahụ bụ mgbasa ozi na aka ekpe na k n'aka nri, mana nwere ụzọ pụrụ iche na-akwado akụ elu.
M na mgbe a na-akwado nke -acha anụnụ anụnụ m logo dị ka mma, ọ dị jụụ, calming, na-emesi obi ike. Yabụ, kama ịmalite ncha site na iji akara ngosi ọhụụ maka Martech Zone, Akwụsịrị m ma tinyekọtaghachi ndị ahụ DK New Media logo. Oyiyi di nkpa ka m choro icho ulo oru na blog.
Yana logo, M meela ka gbanwetụrụ isiokwu on chukwuebuka nakwa. Ọ bụrụ n’ị na-agụ maka nke a n’ime akwụkwọ akụkọ anyị, gbaa mbọ pịa pịa ma lee anya. M belatara ọnụọgụ ederede, ederede gbanwere na mkpụrụedemede ahụ maka ịgụzigharị nke ọma, yana sọadị nwere agba nwere ngalaba (Ọ ga-adị m mkpa ime ha).
Otu ebum n’uche n’afọ a bụ ige gị ntị nke ọma ma bido gị mkparịta ụka… na-agbanwe ndị na-ege m ntị n’obodo. Yabụ, a nabatara nzaghachi ma gbaa ume! Mee ka m mara ihe ichoro imuta banyere otu m ga esi melite saiti na pọdkastị.